Indho-Shareerka Jahliga – Kaasho Maanka
Caddaalad in la sameeyo laba Cali oo isku diida lama arko lkn sidee baan caddaalad u samaynaa oo wax u kala qaybsannaa ayay waligeed dooddu ka taagnaan jirtay.
Dadka marka la yidhaahdo caddaalad sameeya midba meel buu ula kacaa oo midbaa qabiil laandheere ah ka dhashoo qabyaaladda xoojiya, midbaa taajir ahoo hantiilayaasha xaqa u badiya. Midbaa intuu isaga xoog is bido yiraahda ninka roon reerka ha u haro!
Dabeecadda dadka badankooda ayaa waxay tahayba in ay doc u janjeeraan oo wax ay gaar u jecel yihiin oo ay doonayaan in ay wax kaste ka sarreysiiyaan ay jiraan, caddaalad samee haddii la yiraahdana waxaas umbey darajeeyaan.
Faylasuufyadu waligood bay is waydiin jireen sidee baa caddaalad dhab ah loo gaaraa oo hogagaas ina horyaala loogaga badbaadaa oo wax loo qaybsadaa ayadoona doc loo janjeersanayn!
Qarnigii hadda ugu dambeeyay ee labaatanaad waxaa soo baxay faylasuuf lagu magacaabo John Rawls. Faylasuufkan isaga oo isku dayaya in uu su’aashaas ka jawaabo ayaa wuxuu qoray 1971-kii buug caan ah oo loo yaqaan Theory of Justice (Aragti Caddaaladeed)
Wuxuu soo jeediyay xal loo yaqaan veil of ignorance (indho shareerka jahliga) kaas oo runtii dadka badankoodu ay la dhaceen sida uu u fudud yahay iyo sida uu macquulka u yahay.
Sida magacaba ka muuqan karta xalkaas wuxuu qabaa in qofka la leeyahay caddaalad samee ama caddaalad lagala doodayo uu dabo istaago indho shareer jahli ah oo uusan ogaanin qofka rag iyo dumar wuxuu noqon doono, qabiilka uu ka dhalan doono, diinta uu haysan doono, khaniis iyo caadi waxa uu noqon doono, ama gabi ahaanba waxa uu ahaan doono!
QORMO LA XIRIIRTA: Falsafaddii Spinoza
Macquul ma’ahan in aad tiraahdo xuquuqda dumarka halaga qaado oo ilmaha halagu dayaco adiga oona ogayn rag iyo dumar waxaad noqon doontid, macquul ma’ahan in aad tiraahdo madowga hala gumaysto ama caddaanka hala laayo adiga oona ogayn caddaan iyo madow waxaad noqonaysid!
Macquul ma ahan in aad tiraahdo laandheeraha haloo eexdo adiga oona ogayn in aad laangaab noqonaysid iyo inkale, macquul ma’ahan in aad toraahdo laaya gaalada iyo khaniisada adiga oona ogayn inaad gaal iyo khaniis noqinaysid iyo in kale!
Dadku waxay xadgudub iyo caddaalad daro sameeyaan marka ay ogyihiin waxa ay yihiin iyo meesha ay lugaha ku haayaan ee qofku marka uuna ogayn bey’ada uu ka dhalan doono iyo waxa uu noqon doono, caddaalad sax ah oo is jeceel iyo wanaag ku dhisan ayuu doortaa.
Akhyaar intaad indho shareerka jahliga xirataan iswaydiiya dadkaan aad isku haysaan qabyaaladda ama siyaasadda ama diinta ama ra’yiga sidee baad ula dhaqmi lahaydeen haddii aadna ogayn labada dhinac meesha aad ku dambayn doontaan idinku!
Miyaanad maqal tuu dhigay ninkii waalnaa, kii suuqa kusoo waaberiistay subaxa hore, ninkan waallani waxa uu ku dhawaaqayey " Waxa aan raadinayaa Eebbe", badi se dadka hareera taaganaa ma aanay aaminsanayn inuu Eebbe jiro, waxaanay ka dhigteen dhawaqan wax lagu qoslo iyo qaraaxo."Eebbe meeyay" " Eebbe meeyay" ayaa uu ku ooyay ninkii waalnaa, anaa idiin sheegaya ayaa aanu isugu halceliyay! "Waynu...